किन युवतीहरु आफ्नो वक्ष अंग देखाउन चाहान्छन् ? यस्तो छ तथ्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
किन युवतीहरु आफ्नो वक्ष अंग देखाउन चाहान्छन् ? यस्तो छ तथ्य
प्रकाशित मिति २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १८:३० लेखक नेपाली जनता
मनोरञ्जन उद्योगमा सेलिब्रिटी युवती र मोडेलहरूको ‘क्लिभेज सोअप’ फेसनजस्तो बनेको छ । यसले तस्बिर, भिडियो र समारोहमा पनि युवतीहरूतिर धेरैको ध्यान मात्र खिच्ने गरेको छैन, चर्चा पनि चलाउने गरेको छ ।
संवेदनशिल अंग वक्ष सँग अर्थपूर्ण क्लिभेज तथ्य के हो ?
क्याम्ब्रिज शव्दकोषले क्लिभेजलाई ‘महिलाको छातीबीचको सानो स्थान’ भनेको छ । उसको व्याख्यामा ‘त्यो महिलाले माथितिर नछोपीनेगरी लगाएको बेला देखिन्छ । यो पुरूष आकर्षणको केन्द्र पनि हो ।’ नेपालमा क्लिभेज प्रदर्शन सामान्य जस्तो भइसकेको छ । आम साधारण युवतीहरूमा पनि फेसन बनेको छ । सेलिब्रिटीहरूले त नियतबस नै यस्तो देखाउने गरेका छन् । क्लिभेजमा देखिने स्तनका भागमा ट्याटु खोप्नेदेखि सामान्य छोप्नेहरूको नियत नै आकर्षण गराउनु रहेको देखिन्छ । एकजना लेखिकाका अनुसार महिलाले सार्वजनिक रूपमा यौनिक आकर्षणका निम्ति लुगा लगाउँदा देखिने स्थान भनेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्,‘त्यो खासगरी पुरूष आकर्षणका निम्ति गरिने व्यावसायीक उपाय पनि हो । महिलाहरूले धेरै कमाउनका लागि यस्तो प्रकारको ट्रिक अपनाउने गर्छन् ।’ तर यसको सम्पूर्ण अर्थचाहीँ सतर्क वा आकर्षण गराउने नै हुन्छ । पुरूषहरू स्तन हेर्न रुचाउने भएकाले महिला सेलिब्रिटीले क्लिभेज देखाउन थालेको उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय वक्ष (छाती) विशेषज्ञ इलिजाबेथ डेलले भनेकी छन्,‘क्लिभेजको पहिलो नियम भनेको तिमि कतिसम्म निहुरिने भन्ने होइन बरु कहिले र कहाँ देखाउने भन्ने हुन्छ ।’ कतिपय लेखकहरूले क्लिभेजलाई साहित्यिक र सृजनात्मक रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । एकजना लेखकले भनेका छन्,‘सम्झ केटाहरू हो । क्लिभेज भनेको सूर्यजस्तो हो जुन हतासमा एक पटकमात्र हेर्ने गरिन्छ तर यो निरन्तर हेर्नु खतरापूर्ण हुन्छ ।’कतिपय सन्दर्भमा क्लिभेजको यौनिक तर्क पनि राखिएको छ ।
एउटा भनाई छ,‘महिलाको क्लिभेज देखिनुले पुरुषले प्रति स्तनबारे ५० प्रतिशत हेक्का राख्न सक्छ ।’ कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले यसलाई आफु अनुकुलतामा पनि व्याख्या गरेका छन् । एउटा भनाई छ,‘क्लिभेज पुरुषहरूका लागि महिला कति शक्तिशाली छन् भन्ने हतियार पनि हो ।’ क्लिभेजबारे विभिन्न क्षेत्रमा फरक अनुभुति र व्याख्या छन् । अभिनेत्री मेरिलिन मनोरोयले व्यंग्यात्मक हिसाबमा व्याख्या गरेकी छन्,‘निषेधले कठिन गरेको के हो भने क्लिभेज देखाउँदा चित्त दुखाइन्छ तर अन्य केही नदेखाउँदा पनि उनीहरूको चित्त दुखाई हुन्छ ।’
महिलाले नै राख्छन यसरि प्रस्ताव : यस्तो ठाउ जहा पैसा नतिरी शारीरिक सम्पर्क राख्न सकिन्छ ।
कुनै ठाउँमा सित्तैमा सेक्स गर्न पाइन्छ भन्ने सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो सत्य हो । स्लोभाकियामा एउटा यस्तो वेश्यालय छ, जहाँ मानिसले सक्स गर्नका लागि कुनै शुल्क तिर्न पर्दैन । उक्त वेश्यालयका यौनकर्मी महिलाहरुले यौनकर्म गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट रकम असुल्दैनन् । उक्त वेश्यालयमा जानका लागि मानिसहरु तछाडमछाड नै गर्छन् । किनकि त्यहाँ सित्तैमा सम्भोग गर्ने मौका छ ।
तर उक्त वेश्यालयमा सम्भोग गर्न चाहने पुरुषहरुले एउटा शर्त पालना गर्नुपर्दछ । जुन शर्त सबैले नमान्न पनि सक्छन् । वेश्यालयका यौनकर्मी महिलासँग सेक्स गरेको भिडियो खिच्ने शर्तमा मात्र त्यहाँ सित्तैमा सेक्स गर्न पाइन्छ । त्यसरी खिचिएको सेक्स भिडियो जुनसुकै बेला व्यवसायिक रुपमा बिक्री वितरण हुन सक्छ ।
धरहरा पुनर्निर्माण रोक्न माग गर्दै स्थानीयबासीको प्रदर्शन
काठमाडौं । धरहरा पुनर्निर्माण रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । सुन्धारा मासेर ‘झल्के टावर’ बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीयबासीले…
अष्ट्रेलियामा आगलागीमा परी १३ जना घाइते
सिड्नी। न्यू साउथ वेल्स राज्यको राजधानी सिड्नीमा भवन निर्माणाधिन क्षेत्रमा मङ्गलबार भएको आगलागीमा परी…
मौसमका कारण धनुषाका सामुदायिक विद्यालय आजदेखि बन्द !
जनकपुर । प्रतिकूल मौसमका कारण धनुषा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय आजदेखि बन्द गर्ने…
बिद्युत् प्राधिकरणले करिब ५०० जनाको लाइन काट्यो, डेढ सय भन्दा बढी कारबाहीमा
राजविराज । नेपाल…
बालुवाटार प्रकरण: अख्तियारकै चार पूर्व पदाधिकारीको मिलोमतो
काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो तथा संलग्नताको…
लन्डन बिमानस्थलमा ड्रोन उडाउने दुई जना पक्राउ
बेलायत। बेलायतको लन्डनस्थित व्यस्त ग्याटविक बिमानस्थलमा मानवरहीत यन्त्र (ड्रोन) उडाएको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । इसाईहरुको…